Ciyaarihii ugu dambeeyay ee bilaashka ah ee Android - Sii deynta, Faallooyinka, Xeeladaha | Androidsis (Bogga 4)
Tappy Bear waa ciyaar fudud oo iska caadi ah oo aad ka caawiso orso qabashada salmon
Raadi asxaabtaada qaar inay kaa qaniiyaan 'Tappy Bear' oo caadi ah oo gaajaysan gaajo kalluumeysiga biya-dhaca ah.
Aayaha Khando waa taxadar taxaddar leh oo 2D ah oo ay tahay inaad isku daydo
Haddii aad raadineyso madal wanaagsan, si taxaddar leh u faahfaahinta, waxaad horeyba ugu haysatay Aayaha Khando, freemium iyo 50 heerar oo adiga ku sugaya.
League of Legends spinoff Teamfight Tactics wuxuu imaanayaa bartamaha Maarso
Ciyaar istiraatiijiyad ah oo lagu sameeyo koox la socota kooxda heysata horyaallada halyeeyada ee loo yaqaan 'Teamfight Tactics' bisha Maarso.
A monolith weyn oo mugdi ah oo la yiraahdo Clockwork Cube ayaa kugu xujeynaya xujooyinkiisa iyo xujooyinkiisa
U adeegso caqli iyo garaadkaaga si aad u xalliso halxidhaalayaasha ku dhex jira Qalabka Cube-ka ee loogu talagalay Android oo bilaash ah.
Ulala waa iskaashato iskaashi ah oo aad ku hogaamineyso afar dagaalyahan inta lagu jiro Da'da Dhagaxa
RPG la'aan ah oo wadashaqeyn leh si uu ula ciyaaro ciyaartoy kale oo ugu raaxeysto sawirada Ulala, cinwaan cusub oo mobiladaada Android ah.
Boodbood, boodbood, dhejis ku dul boodboodo iyada oo la marayo bay'adaha sixirka ee Ordia
Ka bood, boodbood oo ku dheji darbiyada si noloshaada cusub ay uga gudubto 30-ka heer ee Ordia, ciyaar cusub oo mobilkaaga ah.
U horseed koox farabadan oo zombies ah si ay ugu faafiyaan argagaxa Zombie Night Terror a la Lemmings
Ku beero argagax kulankaan Isbaanishka loo yaqaan 'Zombie Night Terror' kaas oo aad ku dooneysid inaad ku baabi'iso deegaanka kuna disho dad badan.
The epic of War Tortoise 2 qayb labaad oo dalbanaysa sida ugu fiican ee mobilkaaga
Muuqaal weyn oo muuqaal iyo farsamo ah si aad ugu buuxiso shaashaddaada moobiilka khibrad weyn oo ah Dagaalkii Tortoise 2, ciyaar beta cusub.
U soo qaado nolosha badda kalidii barafka Arctic ee ku yaal Abbysrium Pole caajis
Seals, dawacooyinka arctic, libaaxyada badda iyo qaar kaloo badan ayaa kugu sugaya caajis la'aanta Abbyrium Pole, taas oo kuu horseedaysa nolosha Arctic.
PUBG Mobile 0.16.5 waxay la timid xilli ciyaareedkii cusbaa ee Pass Royale, qaab cusub iyo khariidad faneed
Xilli ciyaareed cusub ayaa ka furaya PUBG Mobile iyo sidoo kale warar kale oo taxane ah sida khariidadeeda cusub ee arena, qaab cusub iyo waxyaabo kale oo badan.
Duuliye markabkaaga oo wata tamarta qoraxda kuna jiheeya dhanka boqorka xidigta Race the Sun
Ciyaar xawaare ku socota oo xawaareheedu aad muhiim u yahay in loo duulo markabkaaga qoraxda qorraxda. Waxaa loo yaqaan 'Race the Sun' waana inaad ku ciyaarto.
Infinitode 2 waa mid ka mid ah difaaca munaaraddii ugu fiicneyd ee aan isku daynay sannadihii la soo dhaafay
Waqti badan ayaa laga joogaa tan iyo markii aan ku raaxeysanay ciyaarihii adkaa iyo dhibkii difaaca munaaraddan oo loo yaqaan Infinitode 2 aad u badan.
Girl´s Wars Z waa difaac aasaasi ah oo xoogaa RPG ah iyo geesiyaal badan
Wareerinta ciyaarta, inkasta oo tayada muuqaalkeeda iyo naqshadeynta halyeeyada Gabdhaha Dagaalkii Z, saldhig difaac oo bilaash ah, shaki la’aan.
Eye of Prophecy waa gurguurta godxabsiga oo aad ku dhimato si aad naftaada uga dhigto mid xoogan
Haddii aad raadineyso xayiraad qulqulatada godka leh heerarka 24 oo fiiro gaar ah u yeelo horumarkaaga dagaalyahan, tani waa isha saadaasha.
OverDrive waxay kuu kaxaynaysaa sideetamaadkii inaad ku wado xawaare buuxa
Wadista gaarigaaga isboortiga waa inaad iskuxiraa qoraalada si aad u sameysato laxan leh laxan aad u badan taasina waxay ka dhigeysaa dhismayaasha inay u wareegaan Gudaha
Moonshades waxay mobilkaaga ku qaadataa markhaatiga ay ka tagtay isha quraafaadka ah ee fiiriyaha
Haddii aad taqaanno Indhaha Muuqaalka, waa inaad ku ciyaarto Moonshades, imaatin weyn oo loogu talagalay taleefannadeena Android.
25-ka kulan ee ugu wanaagsan Android tobanka sano
Xaqiiqdii waxbadan ayaad ciyaartay, laakiin liiskan wuxuu muujinayaa waxa ay ahayd tobanka sano ee ay Android jabsatay waxaanan leenahay ciyaaro heer sare ah
Qaabka cusub ee '1943 style' ee loo yaqaan 'Burning Sky' ee mobilkaaga Android
Ciyaaraha degdega ah ee firfircoon ee lagu hagaajinayo diyaaraddaada oo aad wajihi karto diyaaradaha cadowga ee Gubashada Sky ee Android
Dhis saldhigaaga oo ku weerari markabkaaga iyo kooxdaada ciyaaryahanka cadowga ee ku tartamaya Ark
Xakamee markabkaaga, hoos u dhig ciidamada oo aad baabi'isaa saldhigga cadowga ee ku loolama Ark, oo ah ciyaar istiraatiijiyad cusub oo leh waxyaabo RTS ah si loo muujiyo.
Battle Prime wuxuu ku biirayaa Call of Duty Mobile si uu u noqdo toogto ciyaartoy badan si loo xisaabiyo
Waxay si toos ah ugu socotaa Call of Duty Mobile waxayna leedahay aasaaska lagama maarmaanka u ah inuu si baaxad leh u koro. Battle Prime kadis ah.
Ku dhis goobta dayax gacmeedkaaga gudaha adduunka post-apocalyptic ee Dagaalada Cosmic, mid ka mid ah hindisaha xilligan
Ka hor tag ciyaartoyda kale, noqo ugaadhsade fadli ah oo aad nolol ku sameysid Dagaalada Cosmic, ciyaar cusub oo Android ah oo khibrad gaar ah leh.
Steel Rage waa toogte baabuur aalado badan oo khadka tooska ah lagu ciyaaro, ma weydiisan kartaa wax intaas ka badan?
Iyada oo in ka badan naqshadeynta wanaagsan, waxay nagu qaadaneysaa ciyaaro aad u daran oo ka dhan ah ciyaartoy kale oo cinwaankan loo yaqaan 'Steel Rage' oo aad ku haysato Android.
Taksigaaga qaado oo noloshaada darawal taksi ku gal adigoo adeegsanaya jilista Taksi Sim 2020
Waxaad booqan doontaa magaalooyin sida Rome ama New York inta aad taksiga kaxaysanaysid waxaadna rakaabka uqaadan doontaa meeshii ay aadayeen markay fuulaan.
Fiisigiska sheyga ugu fiican ee toogashada Cannon!
Caadi ahaan cusub oo aan ku khasbanaaneyno inaan si caqli gal ah walxaha u dhigno heerka isla markaana aan kubadaha ugu dhufanno Cannon Shot! loogu talagalay Android.
Dhamaan cayaaraha Android ee iibka ku jira Kirismaska
Liis aad u wanaagsan oo ciyaaro ah oo ay la socdaan Stardew Valley, Final Fantasy, Startrader, Door Kickers, Evoland, Baldur's Gate iyo kuwo kale oo badan oo lagu raaxeysto.
Abuur boqortooyo huteel kuu gaar ah oo ku yaal Hotel Empire Tycoon
Goobaha 5-xiddigle, hudheelada hudheellada ama kooxaha dabaqyada ayaa noqon doona qaar ka mid ah xarumaha aad ka maamusho Hoteelka Empire Tycoon.
Ku milmaan jilayaasha Om Nom: Isku dar, cusub oo ka yimid abuurayaasha Goo Xadhig
Isku milmaan jilayaasha si aad u abuurto kuwo cusub oo aad uga caawiso xayawaanku inay liqaan miro badan Om Om: Isku duub, cinwaanka cusub ee Ciyaaraha Keptolab.
Lumia Saga waa MMORPG adduun furan oo leh dagaal toos ah iyo wax kasta oo "aad u fiican"
Waad ku dabaalan kartaa, ku raaci kartaa, xitaa waad ku dhex dabaalan kartaa adduunyada joogtada ah ee furan ee Lumia Saga, oo ah MMO cusub.
Tartanno gaagaaban oo lagula tartamo kuwa kale kuwa ugu waaweyn ee ka mid ah tartamayaasha Kacdoonka
Wareegyo gaagaaban si aad ugu raaxaysato Mustang-gaaga ama Ford GT mobilkaaga oo wata Rebel Racing, oo ah cinwaan cusub oo tayo leh oo Android ah.
Baacso wiilka yar adiga oo albaabbada kaa fiirinaya ee xujooyinka yaabka leh ee Albaabada: Baraarug
Raadi waxa ku dhacaya wiilka kaa daawanaya Albaabbada: Halxiraalaha baraaruga iyo kan ku hor dhigaya marinno taxane ah si aad u furto.
Forgotton Anne waa riwaayad sixir aflaam ah oo ka buuxaan xujooyin iyo astaamo
Riwaayad sixir ah oo lala socdo dhawaqa filimka ee loo yaqaan Forgotton Anne. Sheeko la mid ah kuwa kale oo yar iyo in aan kugula talinno Androidsis.
Basket Dunk 3D waa casriyeynta cusub ee ka socota Ciyaaraha Ketchapp kaas oo lagu quudiyo kuwa kaa soo horjeeda
Ciyaaraha Ketchapp waxay noo keeneysaa ciyaar kubbadda koleyga ay tahay shakhsiyadda ugu weyn ee cayaarahaas nus daqiiqo ee aan caadiga ahayn.
Inta badan barnaamijyada iyo ciyaaraha la soo dejiyey tobankii sano ee la soo dhaafay
Ragga ku jira App Annie waxay abuureen darajo aan ku arki karno cayaaraha ugu badan ee la soo dejiyey iyo codsiyada soo saaray lacagta ugu badan
Qurux qurux badan oo qurux badan oo loo yaqaan 'Poopdie' oo ka socota PewDiePie
Haddii aad ku dhexjirtid gurguurta godka, youtuber-ka caanka ah ayaa kuu keenaya Poopdiekan oo wata qurux muuqaal leh iyo heerar ballaadhan oo lagu ciyaaro.
Qaad qaansada oo bartilmaameed ka dhig bullseye ka dhanka ah ciyaartoy kale oo ka tirsan Kooxda Qaansoleyda
Ciyaaryahanno badan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad xirfadahaaga qaanso iyo fallaadh geliso imtixaanka kulankaan aadka uxun ee freemium loo yaqaan 'Archery Club'.
Ka xado rinjiyeyaasha qiime sare leh Master Tuug, oo ka cusub Ciyaaraha Ketchapp
Ku xaddid matxafyada caanka ah si aad u qaadato shaqooyinka rinjiyeyaasha caanka ah ee Master Tuug, oo ka cusub Ciyaaraha Ketchapp.
U halgama xuquuqda gabdhaha iyo wiilasha adduunka ku yaal Xaqiiqda Runner oo leh santuuqaaga iyo lugahaaga
Qaado sabuuradda ama isticmaal lugahaaga si aad ugu dhigato 5 heer oo carqalado ka buuxa Runner Runner. Ciyaar ay soo saartay UNICEF.
Fortnite wuxuu siinayaa Star Wars Tie Whisper hangll hang
Fortnite wuxuu siiyaa dhamaan ciyaartoyda kaqeybgalaya munaasabada soo bandhigida trailer gaarka ah ee loogu talagalay filimka cusub ee Star Wars ee ah Tie Whisper hang glider
Ciyaar xaqiiqda isbarbar socota ee cabbirka Ubi ee caadiga ah
Muuqaal ahaan soo jiidasho leh oo leh jawi jawi xasaasi ah, Ubi's Dimension waa mid ku cusub oo ku cusub Android.
Klee waa mid cusub oo casri ah oo leh laxan weyn oo aad ku qasbanaan karto inaad ahaato qof nadiif ah
Waxay tusaale u tahay sida dabeecaddu ugu qasban tahay inay ugu dhaqaaqdo barxad firfircoon oo la yiraahdo Klee. U diyaargarow garaacistiisa weyn.
Ku sakhraam halista tallaalka cabsida ee Ailment
Haddii aad rabto farshaxan weyn oo pixel ah iyo goob Isbaanish ah oo kugu dhejisa, hadda waxaad kala soo bixi kartaa Aliment, ciyaar cusub oo mobilkaaga ah.
Dareenka ugu horreeya ee Mobile Desert Mobile, oo ah meel sare oo MMORPG ah
Jaantus ahaan waa tan ugufiican ee aan aragnay waana taas tan keentay in aragtiyadan ugu horeysa ee Black Desert Mobile ay yihiin, MMO cusub oo cusub.
PUBG Mobile 0.16.0 Hadda Waa La Heli Karaa - Dhammaan Xusuus-qorka Patch with New Racing Mode, Christmas Theme, and More
Mawduuca cusub ee Kirismaska, qaabka tartanka cusub, tallaabooyinka ka hortagga hacker-ka, bogsoo intaad guurto iyo wararka kale ee PUBG Mobile 0.16.0
Google wuxuu ku sii jiraa seddex iyo tobankiisa: kama dhigi doono mid ka reeban Fortnite wuxuuna kugu qasbayaa inaad 30% komishan ka noqoto
Cayaaraha Epic ma sahlanaan doonaan, maxaa yeelay Google wali wuxuu ku jiraa seddex iyo tobankeeda oo aan hoos u dhigin guddiga 30% ee loo qaado microtransaction kasta.
Hadda waxaad ku abuuri kartaa dabeecaddaada Black Desert Mobile ka hor intaan server-yadu furin berri
In ka badan oo ka xiiso badan MMORPG, in kasta oo aysan u baahnayn kuwa mushaharka ku bixiya inay ku guuleystaan ​​walxo aan horay ugu ogaanay ciyaaro kale oo badan oo khadka tooska ah ah.
Baadhaha Riyada waa biimayn sawir leh oo aad ku ogaan karto wax ka badan 200 heerar
Baro sawiradaan walxaha iyo jilayaasha heerka si aad uhesho waxyaalaha qarsoon ee muuqaal kasta. Ciyaar gaar ah.
Fortnite wuxuu soo bandhigi doonaa trailer cusub Star Wars: Qeybta IX - Kacsanaanta Skywalker
Diisambar 14, Fortnite wuxuu si toos ah nooga tusi doonaa ciyaarta, trailer cusub oo loogu talagalay filimka cusub ee Star Wars: The Rise of Skywalker
Cayaaraha Epic waxay rabaan inay ku qaybiyaan Fortnite Play Store oo leh shuruudo gaar ah
Waxay u muuqataa in ugu dambeyntii fikradda ah in loo qaybiyo Fortnite meel ka baxsan Play Store aysan ahayn fikrad aad u wanaagsan Ciyaaraha Epic.
Waxaan si rasmi ah u tixgelin karnaa buuggaagta waayeelka: Halyeeyadii dhintay
Bethesda waxay go'aansatay inay joojiso abuurista waxyaabo cusub iyo cusbooneysiin ku saabsan ciyaarta kaararka RPG ee loo yaqaan 'The Elder Scrolls Legends'.
Ku burburi qaababka midabada leh ee xiddigaha nasashada iyo balwadda Nuurka Xiddigaha
Xidigaha xiddiguhuna xiddigohoodu waxay ka sameysmeen qaabab muraayad midab leh si ay u kala jabiyaan oo ay sidaas ugu raaxaystaan ​​ciyaar nasasho wanaagsan leh.
PUBG Mobile waxay heli doontaa taageerada 90FPS iyo run 10-bit HDR
Ciyaaraha Tencent waxay dhawaan soo bandhigi doonaan taageerada qaabka 90FPS iyo run 10-bit HDR ah si cayaaraha looga dhigo mid dheecaan iyo midab leh.
Madadaalo aan caadi aheyn oo loo yaqaan Bouncing Buddies taas oo ka dhigaysa xayawaan badan inay ka boodaan
Maaha in heerarku aad u fudud yihiin, laakiin wax yar oo dhib ah ayaa ka maqan tan caadiga ah ee loo yaqaan Bouncing Buddies ee aad horey ugu haysatay Android.
Mazuna World waa madal adiga kugu sugaysa iyada oo leh heerarkeeda 130 aad oo aad u eg "Super Mario"
Waxay u timaadaa Android oo doonaya inay boos ka hesho dhulalka loo yaqaan 'Mazuna World'. Waxay leedahay tifaftire u gaar ah markaa waad abuuri kartaa iyaga.
EVE Echoes hadda waxay ku jirtaa beta furan: aragtida ugu horreysa ee koonkan ballaadhan ee mid ka mid ah MMO-yada ugu fiican waqtiga oo dhan
Dareenka ugu horreeya marka la ciyaarayo beta-ka furan ee EVE Echoes, meel bannaan oo MMO ah oo aad ku noqon karto burcad-badeed, ugaadhsade fadli ah ama waxaad rabto
PUBG Mobile waxay ku dari doontaa qaabka Tartanka Dhimashada cusbooneysiinta soo socota
Habka tartanka dhimashada wuxuu noqon doonaa cibaaro ugu weyn oo ka imaan doonta cusbooneysiinta soo socota ee PUBG Mobile
Apple Knight waa masrax ficil ah oo lagu sahaminayo heerar si aad ah loogu daryeelay muuqaalka
Imaatin weyn oo loogu talagalay Android barnaamijyadan waxqabadka ah ee aad tufaaxada ugu tuureyso cadawga iyo taas oo ay tahay inaad ogaato sida loo boodo.
Farshaxanka pixel ee barxaddan loo yaqaan 'Bubble Tale' ayaa ka badan deeqsi si uu ugu sawiro waayo-aragnimo aad u xiiso badan taleefankaaga gacanta.
Waxaan tijaabinay Wadada Dhimashada ee Kanada, filim wadada loo yaqaan 'ARPG road' oo leh zombies badan hadana waxaad leedahay qiimo dhimis 90% ah
Dhowr maalmood, cinwaankan ARPG ee loogu magac daray Wadada Dhimashada ee Kanada wuxuu ku jiraa qiimo dhimis 90% ah waana wax lala yaabo.
Hadda waxaad ka ciyaari kartaa Stadia taleefan kasta oo Android ah oo leh 'ROOT'
Waa adeeg hadda u gaar ah Google Pixels oo haddii aad mobiil ku haysato ROOT aad ku ciyaari karto Stadia.
Haddii aad taqaano anime, waxaad gebi ahaanba lagu siri doonaa ARPG-gaan oo la yiraahdo BLEACH Mobile 3D wuxuuna ku yimaadaa Android xaalad aad u wanaagsan.
Halyeeyada & Sixirka geesiyaasha ah: Waayaha fowdada ama sida Ubisoft u barto waxa aan ahayn in laga xishoodo
Maamulahaas oo sheegay in la bilaabo ciyaartan loo yaqaan Might & Magic Heroes: Era of Chaos oo ka socda Ubisoft ma xishoodo.
Waxaad hadda isticmaali kartaa joystick Wicitaanka Waajibaadka: Mobilada, inkasta oo ay jiraan xaddidaadyo
Haa, waxaan ugu dambeyntii isticmaali karnaa joystick si aan ugu ciyaaro Call of Duty: Mobile qalabkayaga Android. Inkasta oo ay jiraan xaddidaadyo qaarkood.
Xaqiiqda sii kordhaysa waxay kugu qaadaneysaa inaad sugto wicitaan taleefan ah oo gurigaaga ah oo ku yaal Shan Habeen oo ku yaal Freddy's AR: Gaarsiinta Gaarka ah.
Sida loo soo dejiyo Minecraft qalabka aan la taageerin
Haddii qalabkaagu uusan la jaanqaadi karin Minecraft oo aadan ka rakibi karin Play Store, waxaan ku tusi doonaa xeelad aad ku soo dejiso oo aad ugu raaxaysato ciyaartan.
Qalabka aan ku habboonayn Minecraft Earth
Haddii aad rabto inaad ogaato haddii qalabkaagu uu la jaan qaadayo iyo in kale Minecraft Earth, waxaan kugu martiqaadayaa inaad ogaato shuruudaha, si dhakhso leh waad u hubin kartaa.
Hawlgalku wuxuu ku dhawaaqay sii-deynta qaabka zombie ee Wicitaanka Waajibaadka: Moobaylka Noofambar 22. Nasiib darro Spain, ...
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato anime dhab ah, ku samee moobaylkaaga Sword Art Online Alicization Rising Steel by BANDAI NAMCO.
Diyaar u noqo inaad hagaajiso markabkaaga oo markaa awood u yeelatid inaad ka takhalusto dhammaan kooxaha maraakiibta cadowga ah ee aad ka heli doonto Dagaalkii Gantaalaha Galaxy.
Istuudiyaha Halfbrick wuxuu nagula yaabay Dagaalkiisa Magic Brick Wars iyo cayaartiisa 1V1 taabashada Tetris
Istuudiyaha Halfbrick wuxuu noo keenay ciyaaro sida Dan the Man ama Jetpack Joyride si aan hadda u wada siino Magic Brick Wars iyo ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku ciyaara.
Minecraft Earth ayaa hadda laga heli karaa beta qof kasta oo leh xaqiiqadiisa la kordhiyay
Minecraft Earth waxay la timaadaa maamuus oo dhan sidaa darteed xaafadaada ama magaaladaadu waxay noqoneysaa adduun dhan Minecraft oo lala abuuray asxaabtaada.
Maamulaha Kubadda Cagta 2020 wuxuu si rasmi ah u bilaabayaa Android
Maamulaha Kubadda Cagta ayaa hadda lagala soo bixi karaa taleefannada Android iyo kiniiniyada Play Store si rasmi ah waxaana lagu sii daayaa laba nooc oo kala duwan.
Waa maxay Hatch, barnaamijka socodka ciyaarta ee loogu talagalay Android oo leh in ka badan 150 kulan
Kani waa adeeg socodsiinta ciyaarta taas oo Arkanoid Rising ay ka muuqato isla markaana Hatch ay ku dhiirrigeliso dad badan inay isku dayaan barnaamijkooda.
Hot Wheels Infinite Loop wuxuu bixiyaa 8-cayaaryahan-waqtiga dhabta ah oo isku dheelitiran oo leh shilal xad dhaaf ah iyo jaranjarooyin
Hot Wheels Infinite Loop waa multiplayer cusub oo khadka tooska ah ka socda Mattel kaasoo kuu keenaya wax ka badan indho qabasho muuqaal iyo ciyaar leh.
Wicitaanka Waajibaadka: Qaabka zombie-ka moobiilka ayaa la heli karaa Nofeembar 22
Laga soo bilaabo Oktoobar 1dii hore, Wicitaanka Waajibaadka Waajibaadka ayaa horeyba loogu heli karaa aaladaha moobaylka, laakiin aan si buuxda u buuxin, maaddaama qaabka ciyaarta zombies weli aan la heli karin.
Jidka Mobilada Masaarida ah ayaa lagu shaaciyey fiidiyow ahaan iyadoo la adeegsanayo gameplay: midka ku murma Diablo kursiga ARPG
POE ama Path of Exile, ayaa loogu dhawaaqay Android sida Wadada Musaafurinta Mobilada oo fiidiyowga waxay umuuqataa mid sharaf leh iyadoo aan luminin iota nooca PC ah.
OVERDOX waa royale dagaalyahan cusub oo 12 ah oo leh aragti isometric iyo aragti mustaqbal leh
OVERDOX waxay kuu kaxaynaysaa ciyaaro badan oo khadka tooska ah oo khadka tooska ah laga ciyaaro oo mustaqbal leh oo leh aragti aad u qurux badan oo qaab Diablo ah. Shaqo weyn muuqaal ahaan iyo farsamo ahaanba.
Dagaal Jebiyayaashu waxay kuu kaxeeyaan qaab-dhismeedka isku-dhafan ee aad ka ciyaari karto kombiyuutarkaaga ama mobilkaaga Ururinta RPG ee geesiyaal.
Heshiiska ay Epic Games la gaareen Farshaxanka elektaroniga, wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku iibsanno maqaarka Stormtrooper dukaanka Fortnite
Waxqabad ficil weyn oo kuu keenaya heerar aan kala sooc lahayn oo la soo saaray oo la yiraahdo Meganoid 2017. Tag freemium si aad isugu daydo
Wicitaanka Waajibaadka: Moobaylku wuxuu ka badan yahay 150 milyan oo soo degsasho ah
In kasta oo xaqiiqda ah in tirada soo degsashada Wicitaanka Waajibaadka ay aad u badan tahay, tirooyinka dakhliga ayaa u muuqda inaysan la socon
Arkanoid Rising waa daabacaadda cusub ee weyn ee mid ka mid ah cayaaraha ugu sheekooyinka badan
Arkanoid Rising waa soo noqoshada mid ka mid ah cayaaraha caanka ah si aad ugu raaxeysan karto sida aan waligeed uga dhicin moobilkaaga Android. Wax walba oo ka socda Hatch.
Ugu dhaadhaco gacmaha geesi dagaalyahan geesi ah oo ku sugan Deeprealm Odyssey
Deeprealm Odyssey waxay horey u balanqaaday inay kujirto beta waxayna sugeysaa waxyaabo badan oo soo socda si ay ugu raaxaystaan ​​dabeecada weyn.
Sida lacag loogu sameeyo samaynta sahaminta Google
Fiidiyowga aan ku sharaxayo sida lacag loogu kasbado sameynta sahannada Google ee raaxada ay bixiso gundhigyadeena Android.
Mashiinka 'Squish Machine' waa madal aan caadi ahayn oo looga fogaado in la jajabiyo
Mashiinka 'Squish Machine' waa ciyaar cusub oo aan caadi ahayn oo loogu talagalay Android kaas oo ay tahay inaad isku daydo inaad ka hortagto geesiga weyn in la jajabiyo.
Gudbinta Void waa gacmo-ku-dirir SEGA oo ku saleysan anime iyo kuwa jecel manga
Ka gudubka Void wuxuu noqon karaa tusaalaha fudud ee cayaaraha ay doorbidaan jiilka cusub ee ciyaartoydu iyo sidoo kale waa inaad fiirisaa.
Ducks waxay la wareegaan awoodda barnaamijkan qabow ee loo yaqaan 'Crusaders Cracked'
Haddii aad raadineyso Daffy Duck, waxaad ka heli doontaa isaga oo ku jira siyaabo fara badan barxaddan loo yaqaan 'Cracked Crusaders', oo hadda laga heli karo Android.
Sidoo kale goor dhow u imanaya nooca 0.15.5 falcon as wehel ah. Laakiin berrito waxaad yeelan doontaa khariidad cusub iyo wax intaa ka sii badan.
Supercell wuxuu joojiyaa Rush Wars si joogto ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan sababaha SuperCell u joojisay horumarinteeda ciyaarteeda cusub ee Rush Wars oo aan gaarin guusha la rabay.
Golf Golden Tee Golf wuxuu u yimaadaa Android iyadoo khibrad u leh in ka badan 30 sano gadaashiisa
Haddii aad raadineyso ciyaar golf wanaagsan oo loogu talagalay mobilkaaga iyo qaabab badan oo ciyaarta ah, kani waa Golf Dahab ah oo loogu talagalay Android. Xoogaa lacag ah si aad u guuleysato.
AnimA waa qaab tayo sare leh oo Diablo ah oo loo yaqaan 'ARPG' oo loogu talagalay moobilkaaga Android
Haddii aad raadineyso ARPG tayo leh, tani waxay noqon kartaa AnimA, ciyaar aad u adag oo cusub oo loogu talagalay Android oo leh 3 fasal iyo wax ka badan.
Mindustry waxay kuu keeneysaa khibrada Factorio ee kombuyutarkaaga oo aad ku heleysid moobil badan oo khadka tooska ah ku ciyaara
Mindustry waa ciyaar jilitaanka Factorio ah oo kuu keeneysa ciyaarta PC-ga mobilkaaga leh iskaashato wada-shaqeyn iyo PVP.
Monopoly for Android waa cusbooneysiinta ciyaarta guddiga quraafaadka ah markan waxaan rajeyneynaa inuu yahay nooca aan wada dooneyno.
The Quarry waa ciyaar cusub oo Warshad ah oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto silsilado wax soo saar adigoo qalabka kala soo baxa dhulka mobilkaaga.
Diablo Immortal ayaa shalay lagu soo bandhigay ciyaarta ciyaarta BlizCon waxayna na tusaysaa faahfaahin qaar ka mid ah waxa uu noqon doono ARPG weyn oo mobilkaaga ah.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka Legend Apex ee loogu talagalay Android, kaas oo wali socda oo dhici doona dhamaadka 2020 ugu horreyn.
Mario Kart Tour wuxuu yeelan doonaa qaab ciyaartooy badan kahor dhamaadka sanadka
Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee multiplayer bishii Diseembar ee sannadkan loogu talagalay Mario Kart Tour ee loogu talagalay dadka isticmaala Golden Pass.
Pokémon wuxuu gaarayaa 3.000 bilyan oo dakhli ah tan iyo markii la bilaabay 2016
Tan iyo markii la bilaabay xagaaga 2016, ciyaarta caanka ah ee Pokémon GO ayaa soo xareeyay in ka badan $ 3.000 bilyan.
Kooxda Zombie Blast Crew waa tallaabo tayo sare leh oo muuqaal iyo farsamo ah em 'up
Ciyaar si aad u wanaagsan uga shaqaysay muuqaal ahaan loona yaqaan 'Zombie Blast Crew' oo ka socda Ciyaaraha Vivid. U diyaar garow arcade wanaagsan.
Minecraft Earth hadda si rasmi ah ayaa looga heli karaa Mexico
Waxaan ka hadlaynay bilooyin badan nooca soo socda ee ciyaarta caanka ah ee Minecraft: Minecraft Earth, ciyaar la socota ...
Rovio wuxuu ku riyaaqay xaqiiqda la kordhiyay ee weyn iyo hal-abuurnimada shimbiraha AR: Isle of Pigs
Laga bilaabo hadda waxaad noqon doontaa taageere Xaqiiqda Dareenka leh mahadsanid Shimbiraha Xanaaqsan AR: Isle of Pigs by Rovio. Lama maqal waxa la qabtay.
Haddii aad seegto Zelda mobilkaaga, TeeTINY Online waa beddel weyn oo ah MMORPG
TeeTINY Online waa mid ka mid ah kuwa ugu rajo wanaagsan ee imanaya beta dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, waxayna si buuxda kuu gelinaysaa MMO furan.
Mario Kart Tour wuxuu gaarayaa 123,9 milyan oo soo dejin inta lagu jiro bisha ugu horreysa
Tirada soo dejinta ee Mario Kart Tour waxay la mid tahay dakhliga hoose ee cinwaankani soo saaray tan iyo markii la bilaabay.
Maareeyaha Baaskiilka Tooska ah ee 2: Maareeyaha baaskiilka ugu dhameystiran ee Android
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Maareeyaha Baaskiilka ee Live 2, ciyaarta jilitaanka cusub ee aad ku maareynaysid kooxdaada baaskiilka oo hadda laga heli karo Android.
Abuur oo ciyaar godadka kuwa kale ficilkan weyn ee RPG loo yaqaan Monolisk
MONOLISK waa ciyaar gaar ah maadaama ay kuu ogolaaneyso inaad abuurto godadkaaga, la wadaagto, qalabeyso geesiyaashaada oo aad la ciyaarto kuwa kale.
Dooxada Stardew ugu yaraan kala bar qiimaha dhowr maalmood: doorka ugu wanaagsan ee beerashada mobilkaaga
Dooxada Stardew waa la iibinayaa dhowr maalmood sidaa darteed waxaad ku keeni kartaa mid ka mid ah jilistayaasha doorka-doorka fiican ee mobilkaaga.
Darawalnimada dhabta ah ee 'Sim Driving Sim' waa jilitaan wadista wadista dhamaan Yurubta iyadoo in ka badan 80 gawaari wata
Baabuur wadista dhabta ah wuxuu kaa qaadi doonaa dhamaanba Yurub oo dhan labadaba xirfadiisa iyo qaabab badan. Waxaad gali kartaa in kabadan 60 baabuur.
Roadcrash.io waa wax caadi ah oo cusub oo aad ku ordi karto tartamo isla markaana aad ku horumarin karto gawaaridaada lacagta laga helo shilalka dadka kale.
Renegade Racing waxay ku timaadaa moobilkaaga Android ka dib 180 milyan oo kulan oo khadka tooska ah ah oo lagu ciyaaray daalacashada
Tartanka 'Renegade Racing' waa imaatin wanaagsan oo ah arcade diyaar u ah inuu uga tago dadka kale cunista boodhka iyadoo ay ugu wacan tahay bay'ada firfircoon ee ay leedahay iyo khibrada uu u leeyahay badmaaxiinta
Qaadacitaan ayaa garaacaya albaabbada PUBG Mobile si loogu buufiyo
Buufinta ayaa ka xanaaqsan bulshada cayaareed ee PUBG. Kuwo badan ayaa haddaba ku baaqaya in la qaadaco ciyaarta illaa inta laga xallinayo.
Qalabka Fortnite ee loogu talagalay Android waxaa loo beddelay Ciyaaraha Epic
Ciyaaraha Epic waxay diyaar u yihiin dhammaan isticmaaleyaasha doonaya inay ku raaxaystaan ​​rakibaadaha Fortnite oo aan si toos ah ula soo bixi karno ...
Gamevil's NBA NOW ayaa ka guuraya wixii aan ka raadineynay ciyaar kubbadda Koleyga NBA ah
Haddii aad NBA aad u jeceshahay, laga yaabee inaad si fiican uga booddo NBA HADA d Gamevil. Cinwaan u muuqda in lagu degdegay.
Ka badbaadi gabadhaada Rasuullada waxqabadka 3D ee loo yaqaan 'Breakout: Dark Prison'
Hakad: Xabsiga Madow wuxuu kuu kaxeeyaa xabsi halkaas oo ay tahay inaad ka badbaadiso gabadhaada, kana difaacdo DNA-keeda fayras khatar ku ah dhulka.
Waxaan ku tusineynaa wax kasta oo aad ku sameyn karto Samsung Galaxy-gaaga oo leh Game Booster muuqaal fiidiyow ah oo aan faahfaahin ka bixinaynin inaad ku raaxeysato ciyaarta.
U diyaar garowga Boqorka Halgamayaasha ALLSTAR, oo hadda laga heli karo Android si aad uga baxdo
Boqorka Halgamayaasha ALLSTAR waa mid kale oo ka mid ah soo galootiga ugu fiican ee aan sanadkan ku soo aragnay nooca dagaalka ee multiplayer online.
Aabe Mareykan ah! Apocalypse Si dhakhso ah ayuu u yimaadaa Android si uu si qurux badan ugu daydo Hoyga burburka
Aabe Mareykan ah! Apocalypse Si dhakhso leh ayuu kuu dhigayaa ka hor intaan la abuurin hoygaaga si aad u badbaadiso qoyska Stan. Ciyaar la mid ah Hoyga burburka.
Magaalada Harvest waa "Dooxada Stardew", laakiin leh ciyaartoy badan, farshaxan pixel weyn oo wali kujira beta
Dooxada Stardew waxay umuuqataa inay la timid tartan adag oo lala galo Harvest Town iyo cayaartooydeeda khadka tooska ah ku cayaara iyo farshaxankaas pixel-ka weyn.
Exactamundo waa ciyaar aan loo baahnayn oo ay tahay inaad ku safarto ka jawaabista su'aalaha meelaha aad booqato. Aqoontu ma dhacdo.
Bombr.io waa a multiplayer «bomberman» si ay ula wareegaan kuwa kale hab qarxa
Bombr.io waa khadka tooska ah ee ciyaartoy badan oo khadka tooska ah oo xitaa ku jira beta aad rabto inaad ciyaarto. Ka cab isha waxyi ee loo yaqaan Bomberman.
Arena Allstars waxay rabtaa inay kuhesho moobilkaaga sidii Chess Battle oo Isbaanish ah
Arena AllStars wuxuu ku biirayaa kuwa Tencent Games iyo Valve si uu u muujiyo inay wali jirto farqi u dhexeeya noocyadan ciyaaraha guddiga.
Jasiiradaha Bloop waa mid iska caadi ah oo adiga ku sugaya in ka badan 50 heer
Jasiiradaha Bloop waa mid iska caadi ah oo heerar badan leh oo midabkiisa iyo jilaaga qosolka leh ay ka dhex muuqdaan. Waxay siineysaa dhibaatooyinka waxqabadka.
Zombieland: Double Tapper waa guji ka socda filimka zombie ee soo socda
Zombieland: Double Tapper waa guji cusub oo loogu talagalay Android kaas oo kuu geynaya astaamaha ugu muhiimsan filimka cusub.
Google Stadia horey ayey ugu laheyd Spain taariikh
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee Google Stadia ee Isbaanishka oo dhici doonta Nofeembar 19 sida horay loo sii sheegay.
Faahfaahinta 7 faahfaahinta Ciyaaraha Tencent ayaa seegay PUBG Mobile Cusboonaysiinta isbedelka
PUBG Mobile wuxuu ku darayaa liis ballaaran oo ah astaamo cusub 0.15.0, laakiin faahfaahintaan waxaa lagu ilaaway isbedelka la daabacay.
Ciyaaraha Rabshadaha ayaa soo socda: hadda waad iska qori kartaa 3deeda kulan ee Android
Ciyaaraha Rabshadaha waxay noo keeneysaa rikoodhkii hore ee seddexdeeda kulan oo aan ku muujineyno League of Legends: Wild Rift, MOBA of MOBAs.
League of Legends: Wild Rift hadda waxay leedahay diiwaangelin hore oo laga heli karo Android
League of Legends: Wild Rift waa dalab kale oo weyn oo loogu talagalay ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku shaqeeya mobilada Android-ka ah waxaanan ku haysan doonnaa Play Store muddo yar ka dib.
Pokémon GO wuxuu abaabuli doonaa dhacdo gaar ah oo leh helitaan lacag leh
Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhacdadan Pokémon GO, oo lagu heli karo oo keliya lacag-bixin, sida Niantic horayba ugu shaacisay boggeeda rasmiga ah.
Filimkii ugu horreeyay ee xilligii Fortnite 11 qulqulaya
Muuqaalkii ugu horreeyay ee xilli kow iyo tobnaad ee Fortnite ayaa hadda la daadiyay, waxa aan hadda ognahay iyada oo aan ogeyn waa goorta Fortnite mar kale la heli doono.
BANDAI NAMCO waxay kubiirtay Pokémon Masters-Style Mobile Gaming oo leh DIGIMON ReArise
Dib u soo kicinta DIGIMON waxay la timaadaa wax walba si ay boos uga hesho kulamada ugu fiican sanadka iyadoo ku saleysan anime, manga iyo in ka badan Japan.
Sida loo fuulo loona qabsado geesaha PUBG Mobile
Khiyaano yar oo macnaheedu noqon karo farqiga u dhexeeya nolosha iyo dhimashada PUBG Mobile adoo og sida loo qabsado qarka sariirta.
PUBG Mobile waxaa la cusbooneysiin doonaa berrito 0.15.0 iyadoo lagu darayo qaab cusub, kor u qaadid, u yeerista xubnaha dhintay iyo waxyaabo kaloo badan.
Traffix wuxuu noogu yimaadaa ciyaar asal ah oo la raaco ka dib dhacdadii weyn ee Mini Metro
Traffix waa ciyaar soo jiidanaysa isha dhiirrigelinta ee Mini Metro ay ahaan jirtay welina tahay. Maamul taraafikada magaalada.
Ka caawi Craams Addams guryo qarsoodi ah qaabeynta gurigooda gaarka ah
Haddii aad ka heshay taxanaha TV-ga ama filimkii ugu dambeeyay, waad ku raaxeysan kartaa Los Locos Addams iyo habkaas lagu dhisayo gurigiisa si waqti fiican loo helo.
Qodo! Waa 100% dib loo cusbooneysiiyay wax walba si ay u noqdaan wax aan caadi aheyn oo lagu garaaco xulashada iyo majarafad
Haddii aad ciyaaray, waa isku mid inkasta oo gebi ahaanba la cusbooneysiiyay. Qodo! Wuxuu la yimaadaa rabitaan badan si uu u sii wado guusha oo uu noqdo mid aan caadi aheyn.
Wicitaanka Waajibaadka: Moobilku wuxuu sii wadaa inuu jebiyo diiwaanada soo dejinta
Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo dejinta tirada badan ee Wicitaanka Waajibaadka: Moobilku wuxuu helay toddobaadkiisii ​​ugu horreeyay suuqa jabiya dhammaan noocyada diiwaanada.
Caqliga weyn ee HP Lovecraft iyo naxdintiisa cakiran wuxuu ku gaaraa Shaydaanka sheekooyinka Jacaylka ah ee Lovecraft
Sheekooyinka Aan Laheyn ee Lovecraft waa soo dhaweyn weyn oo loogu talagalay nooca naxdinta leh waana cinwaan dib u soo celiya xusuusihii wanaagsanaa ee ciyaarta Blizzard.
Waa maxay shuruudaha ay tahay inaan buuxino si aan u ciyaarno Call of Duty: Mobile
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan waxa looga baahan yahay Android si aad u awoodo inaad ku ciyaarto Wicitaanka Waajibaadka: Moobaylka taleefankaaga gacanta.
Daryeel nasasho iyo mid caadi ah oo loo yaqaan Smash Deep
Wax ka qiimo badan oo caadi ah oo loo yaqaan Smash Deep oo taasi waxay isu dhiibaysaa in la ciyaaro si fiiro gaar ah loogu yeesho saameynta kubbadda iyo wejigeeda.
Fortnite iyo cocaine waa sida balwada, sida ku cad dacwada cusub ee ciyaarta
Shirkad sharci oo Canadian ah ayaa dacwad ka gudbisay Epic Games oo loogu talagalay qabatinka Fortnite u soo bandhigo kan ugu yar.
Marvel Realm of Champions wuxuu imanayaa Android sanadka 2020
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka Marvel Realm of Champions, ciyaarta cusub ee Disney ee loogu talagalay Android oo si rasmi ah u dhici doonta 2020.
One Life Extreme Warrior waa ficil RPG lagu xisaabtamayo
Tallaabo cusub oo loo yaqaan 'RPG' oo loo yaqaan 'One Life Extreme Warrior' oo taasi waxay kugu qaadaysaa in ka badan sawirro qabow iyo qaab muuqaal weyn.
Redem furashada dhintay 2 waxaa laga heli doonaa Google Stadia bilawga
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xaqiijinta in furashada dhintay ee Red Red 2 si rasmi ah looga heli doono Google Stadia laga bilaabo bisha Nofeembar.
Second Galaxy waa meel bannaan oo MMO ah oo aad uga gudubto xuduudaha koonkan oo leh 4961 galaxies
MMO oo loo yaqaan 'Second Galaxy' ayaa kuu oggolaan doonta inaad sahamiso in ka badan 4.000 galaxies ee koonkan ballaadhan oo ay tahay inaad ku sahamiso markabkaaga.
Duuli sare Fly Sky High ee ciyaaraha deg degga ah
Fly Sky High waa mid ugub ku ah Ciyaaraha Vivid ee muujiya midabkiisa iyo aragtida la siiyay markii aan la duulno diyaaradeena.
Tani waa sida Fortnite matchmaking u shaqeeyo
Nidaamka isku dheelitirka ee Fornite, oo la heli jiray muddo toddobaad ah, ayaa loogu talagalay inuu ka joojiyo isticmaalayaasha inay ku raaxaystaan ​​ciyaartan.
Habka mugdiga ah ee Google Play Store ayaa hadda rasmi u ah qof walba
Habka mugdiga ah ee muddada dheer la sugayay ee ka yimid keydka arjiga Google ayaa hadda la heli karaa, in kasta oo xilligan lagu xaddiday adeegsadayaasha Android 10
Wicitaanka Waajibaadka: Mobaylku wuxuu dhaafay 20 milyan oo soo degsiimo ah
Nooca mobilka ee Wicitaanka Waajibaadka waxaa soo dejiyey in ka badan 20 milyan oo isticmaale 24 saac ka dib markii la bilaabay.
Hal todobaad gudihiis, Mario Kart Tour ayaa lagu soo dejiyey 90 milyan oo qalab
Mario Kart Tour wuxuu noqday guushii ugu weyneyd marka laga hadlayo soo dejinta soo saaraha Japan Nintendo, in ka badan 90 milyan oo soo degsasho ah
Miyaa lagaa mamnuucay Pokémon GO inaad leedahay Xiaomi? Wali waad soo ceshanaysaa koontadaada
Niantic waxaa laga yaabaa inay ogaatay sababta ciyaartoy badan oo Pokémon GO loogu ganaaxay isticmaalka taleefanka Xiaomi. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta.
Waxaan tijaabinay Call of Duty Mobile, kan ugu badan ee khadka tooska ah ee kubbadda cagta ayaa salaamaya PUBG Mobile iyo Fortnite
Wicitaanka Waajibaadka Telefoonka waa multiplayer khadka tooska ah ee internetka kaas oo noqon doona guul aad u weyn isla markaana la heer ah PUBG Mobile iyo Fortnite.
SEGA waxay bilaabeysaa League of Wonderland, aragtideeda gaarka ah ee ku saabsan Clash Royale 1V1 onlayn
Mararka qaar nuqulada qaarkood waxay ku sii horumariyaan asalka. SEGA maahan inay wanaajineyso, laakiin waxay ku siinaysaa cudurdaarrada lagama maarmaanka u ah inaad ku ciyaarto League of Wonderland.
Wicitaanka Waajibaadka ayaa hadda laga heli karaa Dukaanka Play
Nooca mobilka ee muddada dheer la sugayay ee Call of Duty ayaa hadda laga heli karaa Play Store si loo soo dejiyo.
Soo hel xulashadan afarta kulan ee ugu caansan Nintendo ee aan hadda kala soo dagsan karno Android-ka Dukaanka Play-ka.
Naftaada qaar ka dhig salool la madadaalo popcorn Burst
Waxaad necbeyn doontaa xayeysiinta ciyaartan aan caadiga aheyn ee loo yaqaan 'Popcorn Burst', taas oo kaa dhigeysa inaad u baahan tahay salool karinta.
PUBG Mobile dhibaato weyn ayey ku haysaa haakarisku, ma ogaan doontaa sida loo xaliyo?
PUBG Mobile wuxuu xadidi karaa soo gelitaanka tuugada internetka. Toddobaadyadan waxay ahaayeen kuwo waalan oo ay la socdaan koox kasta oo jabsadeyaasha ah ee ciyaara.
Mudane yaa ku geeya badbaado ay tahay inaad ku noolaato sida ay tahay
Mudane Waa ciyaar badbaado bilaash ah oo loogu talagalay moobilkaaga Android kaas oo ay tahay inaad ka caawiso halyeeyga inuu ku noolaado deegaankaas cadaawada leh.
Pokémon GO wuxuu ciyaarta ka saarayaa dadka isticmaala Xiaomi
Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatadan saameyneysa isticmaaleyaasha taleefannada Xiaomi ee laga saarayo Pokémon GO sabab la'aan.
Champion Strike wuxuu raacayaa wixii ka dambeeyay Clash Royale iyo Gears POP, inkasta oo ay la socdaan horyaallo
Champion Strike waa "Clash Royale" si cad oo ogeysiis la'aan ah. Waxaan u saarnay kooxda heysata horyaalka inaynu ku kala soocno wax uun.
Herocraft wuxuu kuu bilaabay ZigZagged si aad isugu daydo inaad uga baxsato tijaabooyinka shisheeyaha
Hal zig zag oo kale oo leh 'ZigZagged', in kasta oo ay isku amaahiso heerar dheer iyo deegaanno kala duwan. Caadi ah maalmo yar.
Adiga kaligaa ayaa kahortaga wax kayar boqol burcad badeed ah 99kii burcadeed ee weynaa
99 burcad badeed dhimatay waa ciyaar cusub oo loogu talagalay Android taas oo ay tahay inaad soo ogaato taariikhda burcad badeedda oo aad iska difaacdo weeraradooda.
Mario Kart Tour wuxuu dhaafey 20 milyan oo soo dejin ah hal maalin
Raadi wax badan oo ku saabsan guusha soo degsashada Mario Kart Tour ee Android iyo IOS maalinta ugu horreysa suuqa sida horay loogu yaqaanay.
Ku koraan penguins-kaaga oo aad ku abuurto deegaanadooda Jasiiradda weyn ee Penguin
Penguin Isle wuxuu kuu kaxeeyaa dhinaca Arctic si aad u maamusho buur baraf ah oo ay weheliso xayawaankeeda iyo xayawaannada arctic sida nibiriga iyo inbadan
Samsung waxay siisaa maqaar cusub oo Fortnite ah Sebtember 27
Laga bilaabo Sebtember 27, Samsung iyo Fortnite waxay na siinayaan maqaar cusub oo bilaash ah.
Hadda waad iska qori kartaa MMORPG-ga loo yaqaan Black Desert Mobile on Android
Gudaha Black Desert Mobile waxaad kuheleysaa xayawaankaaga xayawaanka ah, dhirta, magaaladaada xitaa waad iska yareyn kartaa MMORPG muuqaal muuqaal weyn leh.
Waxaan isku daynay Mario Kart Tour, waayo aragnimada Nintendo waxay ku jirtaa dhammaan nuxurkeeda
Nintendo wuxuu noo keenayaa dhamaanba sixirkii uu u keenay ciyaarihiisa halyeeyga ah. Mario Kart Tour waa imaatin wanaagsan sanadkaan 2019.
Mario Kart Tour ayaa hadda laga heli karaa Play Store
Ciyaarta cusub ee Nintendo, Mario Kart Tour, ayaa hadda laga heli karaa Play Store si loo soo dejiyo, u soo dejiso gebi ahaanba bilaash laakiin ku iibso barnaamij
PUBG Mobile iyo Amazon Prime waxay ku biiraan xoogagga waxayna na siiyaan abaalmarin bilaash ah oo ah qaab hargaha ah
PUBG Mobile iyo Amazon waxay isku biireen si ay u bixiyaan taxane harag ah oo bilaash ah dadka isticmaala Amazon Prime.
Kaliya cayaarahan waxaa durba mudan in la bixiyo Google Play Pass
Wixii kayar 5 euro waxaad haysan doontaa Google Play Pass iyo liistada cayaaraha aan sameynay oo ah kuwa ugu fiican Android.
Hadda waxaad baran kartaa inaad u ciyaarto Fortnite adigoon u dhiman qeybta hore
Isbedelada ugu dambeeyay ee ciyaarta ay heshay waxaa laga yaabaa inay yihiin sababaha aad ugu baahatay inaad isku daydo inaad mar labaad u ciyaarto Fortnite oo aadan dhiman isla marka aad degto
Raadi wax badan oo ku saabsan guusha PUBG Mobile ay guranayso taasoo dhaaftay $ 1.000 bilyan oo dakhli ah tan iyo markii la bilaabay.
Godka Elemental waa ficil cusub oo RPG ah oo leh farshaxan pixel badan iyo godad godad badan
Wali maha Spain, laakiin waxaad kala soo bixi kartaa APK-ka 'Elemental Dungeon' si aad ugu raaxeysato cayaarahaaga ficilka oo dhan.
Google Play Pass hadda waa rasmi: 350 kulan oo loogu talagalay $ 4,99 bishiiba
Ciyaaraha ku saleysan rukunka Google iyo barnaamijyada barnaamijyada ayaa durba bilaabay in laga helo Mareykanka $ 4,99 bishiiba.
Samee kumanaan isku-darka sixirka ah ee Isku-biiritaanka Sixirka!
Isku biir sixirka! waa ciyaar muuqaal ahaan jacayl ku dhacda oo aad haysato in ka badan 500 oo shey oo aad isku darsato si aadan u seegin.
Kairosoft wuxuu dib ugu soo laabtay dagaalkii lala galay Boqortooyada ee lagu dhisi lahaa boqortooyadaada
Boqortooyada Adventures waxay kuu keeneysaa qaaciddada sixirka ee Kairosoft mar kale si aad u dhisto boqortooyadaada oo aad u yeelato dagaalyahanno iyo in ka badan.
Downwell waa bilaash muddo 6 maalmood ah: astaamaha ugu fiican ee hal-midab ee ugu fiican mobilkaaga Android
Barxad caadi ah oo loo yaqaan 'Downwell' oo lagu garto halbeeggeeda 'monochrome' iyo 'random platform' oo kaa dhigaysa mid khafiif ah haddii aanad taxaddar lahayn
Diyaarado Helicopters ah ayaa imanaya PUBG Mobile! U diyaargarow qaabka cajiibka ah ee cusub ee Payload
Haddii aad seegtay dagaalka hawada iyo hawada iyo hawada, hadda waxaad ku heleysaa PUBG Mobile oo leh habka Payload-ka cusub ee horay ugu jiray beta.
Wicitaanka Waajibaadka: Mobiilku wuxuu horey u lahaa taariikh lagu sii daynayo Android
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda la siidaayo Wicitaanka Waajibaadka: Mobilada loogu talagalay taleefannada Android oo horeyba si rasmi ah loogu xaqiijiyey istuudiyaha.
U qaad mindida sida Master Chef oo ku yaal jeexjeexyo dhammaystiran
Cunnooyinka qumman waa ciyaar aan caadi aheyn oo ay tahay inaad ku gooyso khudradda xawaaraha iftiinka si aad u horumariso oo aad u furto mindiyo iyo khudrad badan.
Sida loo barto barnaamijka adigoo la ciyaaraya Automaton: baro aasaaska C luqadda iyo inbadan
Baro adoo ku ciyaaraya cinwaankan cusub ee loogu talagalay Android ee loo yaqaan Automaton oo ku baraya mabaadi'da aasaasiga ah ee barnaamijka.
Don´t Hug Me waa barxada Jetpack Joyride oo leh dhawaaq aad u qurux badan
Haddii aad dheeshay cinwaanka Halfbrick Studios, waxaad si dhakhso leh u ogaan doontaa waxa ku sugaya barxaddan cusub ee lagu magacaabo Don´t Hug Me iyo inay lacag la’aan tahay.
Gabdhaha Powerpuff waxay ku yimaadaan Android oo ay la socdaan Gabdhaha Powerpuff: Daanyeer Mania iyo Jetpack Joyride
Gabdhaha Powerpuff: Daanyeerka Mania waa mid ugub ah oo ku saleysan gabdhaha Powerpuff oo la yimaada tayo farsamo oo weyn iyo awood qabatin leh.
Ciyaaraha Tencent waxay kuu keeneysaa Knights of the Zodiac si aad ugu noolaato taxanaha isboortiga leh dagaalka ku saleysan leexashada
Knights of the Zodiac waxay ka yimaadaan gacanta Tencent Games si ay kuu keenaan dhammaan sixirka taxanaha firfircoon ee leh shaabadda tayada.
Ma xasuusataa Oliver, Benji iyo Champions? Hagaag, horeyba waxaad ugu haysatay Android oo leh Kabtan Tsubasa: Kooxda Riyada
Kabtan Tsubasa: Kooxda Riyada ayaa timaadda Android si aad ula ciyaari karto Oliver iyo Benji oo ka socda silsiladda taxanaha ah ee TV-ga ee loo yaqaan Champions, maxaad sugaysaa?
Xilliga ugu dhow ee bariga 9 wuxuu yimaadaa PUBG Mobile oo leh Dagaalyahanno Midaysan!
Dagaalyahano, midoobo! Waxay la timid xilli 9 ee PUBG Mobile kaas oo soo baxa maanta si loo gaaro illaa bisha Nofeembar.
Beat Shift 3D waa orodyahan aan dhammaad lahayn oo aan dhammaad lahayn oo leh heerar gacanta lagu qaabeeyey
Caadi ahaan waxaa loo yaqaan 'Beath Shift 3D' taasna waxaa dhiirrigeliya Tron, oo ah siddeed sano jir filim jilitaan dalwaddii ah, si uu kuugu keeno wax isku mid ah mobilkaaga.
Samsung waxay soo bandhigtay barnaamijkeeda PlayGalaxy Link ee qulqulka ciyaarta ee Android iyo Windows
Samsung waxay sii deysay PlayGalaxy Link on Android iyo Windows si aad barnaamijyada kombiyuutarkaaga kumbuyuutarkaaga ugala socon karto taleefankaaga Galaxy.
PUBG Mobile wuxuu ku dhawaaqayaa Qaab Cusub oo Lacag Bixin ah: Miyaynu Adeegsan Doonnaa Gantaalaha Gantaalaha? Ma duuli doonnaa diyaaradaha qumaatiga u kaca?
Gantaalaha gantaalaha iyo helikabtarrada ayaa ka muuqda sawir ay qortay PUBG Mobile laftiisa taasna waxay tilmaami kartaa habka loo maro qaab cusub.
Rovio wuxuu doonayaa inuu ka qaado carshiga midabbo xujooyin u dhigma midab ka soo jeeda Boqortooyada oo leh Qarxa Sonkorta!
Qarxa Sonkorta ee Rovio ayaa leh ciyaaro deg deg ah oo ka badan heerarkeeda 1.000. Cinwaan balwad leh oo ku adkeynaya BOQORKA.
Mini Life waa adduun bulsho oo avataar ah oo aad "nolol yar" kula qaadan karto asxaabtaada iyo asxaabtaada
Mini Life waa ciyaar bulsheed oo aad la geli doontid fikirkaaga bedelida si aad u dhex gasho oo aad ula kulanto dad cusub adduunkaaga casriga ah.
Midabada u dhigma si aad ugu beertid geedo iyo ubaxyo ku yaal Colorzzle
Colorzlee waa cinwaan cusub oo loogu talagalay Android kaas oo aad ku neefsan karto xasilloonidaada maskaxda adoo adeegsanaya xujooyinka iyo sawirada si fiican loo farsameeyay.
Pokémon Masters waa soo dejin ku dhacday Android
Ka ogow wax badan oo ku saabsan guusha soo degsashada Pokémon Masters ee ku taal Android toddobaad uun kadib markii si rasmi ah looga heli karo Play Store.
Tropico waxay u timaadaa Android si aad u noqotid hogaamiyaha jasiiradda Caribbean
Tropico waxay si buuxda ugu fiicantahay Android sidii ciyaar qiimo leh oo kaa hor dhigaysa dawlada jasiiradaha Caribbean-ka oo leh waxa ay u baahan tahay oo dhan.
Xaqiiqda sii kordhaysa ayaa mar kale la timid Ragga ku jira Madow: Duulaankii Caalamka
Nuqul ka mid ah kuwa Ciyaaraha Niantic, Ragga Madowga Kujira: Duulaanka Caalamiga ah wuxuu imanayaa isagoo isla bixinaya isla markaana sii joogaya sidii wax aan waxba ka jirin ...
SEGA waxay ku bilawday Fist of the North Star on Android: dagaalka ku saleysan dagaalka ee guud ahaan freemium
Feedhka Xiddiga Waqooyiga ayaa u yimid taageerayaasha manga si ay ugu raaxaystaan ​​isla sheekada u horseeday inay noqoto mid ka mid ah manga ugu iibsiga badan.
Riwaayad weyn ayaa kugu sugeysa xujooyinka iyo ficilka Hoppia Tale
Shaki la'aan waxaan u dhigi karnaa Hoppia Tale mid ka mid ah ciyaaraha sanadka ee loogu talagalay Android. Wax walba waxaa loogu talagalay in lagu abuuro khibrad.
Brown Dust ayaa hadda lagu heli karaa Isbaanish si loogu helo taleefannada Android
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta Boorka buniga ah ee taageerada ku leh Isbaanishka loogu talagalay Android oo horeyba si rasmi ah looga bilaabay goobta lagu ciyaaro ee 'Play Store'.
Orod! Maamulaha Motosport Mobile 3 gebi ahaanba waa bilaash muddo 6 maalmood ah
Maamulaha Motosport Mobile 3 waa ciyaarta jilista gawaarida ugu wanaagsan ee F1 waxaadna haysataa bilaash mudo 6 maalmood ah inaad madax ka noqoto koox
Waqtiga Tiny Travelleres waa madal dib u socod ah oo lagu dhex maro waqtiga
Musaafiriinta Waqtiga Yar waa madal ay ku dhex safraan waqti iyo tusaale fudud oo ah sida aan loo bilaabin ciyaar ku saabsan Android.
PUBG Mobile Lite waxay gaareysaa dalal cusub cusbooneysiinteeda
Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilaabista PUBG Mobile Lite ee suuqyada cusub ee Latin America mahadnaqa cusboonaysiinta weyn ee hadda rasmiga ah.
Hawsha wanaagsan ee xiisaha leh ee madasha qaababka Waalida ayaa hadda bilaabmaya
Qaabab waalan ayaa ah barxad cusub oo loogu talagalay Android kaas oo aad u baahan doonto inaad beddesho muuqaalkaaga si aad uga adkaato dhammaan heerarka.
Microsoft waxay xannibaysaa rakibaadda Minecraft Earth ee aan la fasaxin
Haddii aad ka fekereyso inaad soo degsato APK aan rasmi ahayn ee Minecraft Earth ee loogu talagalay Android, waad iloobi kartaa sababta aysan u shaqeyn doonin.
Dukaanka Google Play wuxuu bilaabi doonaa inuu si toos ah ugu ciyaaro fiidiyowyada dhamaadka bisha
Dhamaadka bishaan, Play Store wuxuu bilaabi doonaa inuu si toos ah u ciyaaro fiidiyowyada ku jira codsiyada dukaanka arjiga.
Diyaarad Duuliyaha Duuliyaha Diyaaradda waa jilid diyaarad leh in ka badan 150 km² aag ah
Haddii aad rabto inaad u duusho meelaha dhaadheer, waxaad horay u haysataa Qaboojiye Duuliyaha Duuliyaha Diyaarka ah oo ku jira moobilkaaga Android si bilaash ah inkasta oo aad xayaysiinayso
Kala bixi lugahaaga oo raadi dariiqa aad u jeceshahay qofka aad jeceshahay ee ku yaal Cagaha Lugta
Waa inaad lugahaaga kala bixisaa Lugaha Fidsan si aad uhesho dhanka gacaliyahaaga ama gacaliyahaaga kulan ka buuxo jaceyl, laakiin xayeysiin.
The anime One-Punch Man hit: Wadada loo maro geesiga hadda laga heli karo Android: waan tijaabinay
Hal-Punch: Wadada loo maro Halyeeygu waxay noo keenaysaa guusha anime, laakiin waxay aad uga hooseysaa waxa ay kooxdeeda taageerayaashu filayeen. Hada la heli karo
Waxyaabaha Shisheeyaha 3 waxay u yimaadaan Android sida cinwaan qiimo leh iyo iskaashi maxalli ah
Waxyaabaha Shisheeyaha 3 waxay la yimaadaan dhammaan hamiga ah inay noqdaan mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican ee ku saleysan filimada iyo taxanaha TV sannadihii la soo dhaafay.
Knight Quest waa ciyaar iska caadi ah oo ay tahay inaad kula guurto qaybaha chess-ka
Knight Quest wuxuu la yimaadaa dhammaan hamiga ah inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee ku habboon xeerarka iyo dhaqdhaqaaqa qaybaha chess.
Faahfaahin iyo fiidiyow League of Legends ama LoL for Android ayaa soo baxaya
LoL for Android waxay noqon kartaa dhiirrigelin kale oo loogu talagalay mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagu ciyaaro ciyaaraha khadka tooska ah ee waqtiga oo dhan. Ku daabac taleefannada gacanta.
DeNA ayaa hadda sii deysay Pokémon Masters waxayna noqon doontaa mid ka mid ah hits-ka sanadka ee dhammaan awooda jiidista ee taxanaha.
Ka hel sirta haramka iyo khasnadaha Relic Hunter ee 111%
Relic Hunter waa ciyaar iska caadi ah oo ay tahay inaad sahamiso Ahraamta si aad uga hesho qarsoodigooda. 111% waxay noo keeneysaa ciyaar wanaagsan oo moobilkeena ah.
Xakamee baaskiilka tijaabada ah ee 'Gravity Rider Zero' si aad ula tartanto ciyaartoy kale
Cuf-jiidashada Raadiyaha 'Zero Rider Zero' wuxuu u yimaadaa Android si uu uga dhaafo Hill Climb Racing 2 mahadnaqa uu u leeyahay heer sare xagga sawirada, waxqabadka iyo heerka farsamo.
Sida loo helo Terraria cusub haddii aad ku iibsatay nooca buuxa oo tijaabada ah micropayment
Waxaan ku tusineynaa sida loo helo nooca cusub ee Terraria oo leh 1.3 haddii aad ku iibsatay Terraria nooca tijaabada micropayment.
Terraria 1.3 ayaa lagu sii daayay dib u qaabayn cusub oo cusub, ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku shaqaysa iyo waxyaabo kaloo badan
Terrraria 1.3 waxaa loola jeedaa inay si buuxda ugu ciyaari karto moobaylka badhamada iyo isku xirnaanta u go'an shaashadaha taabashada. Waqti aad mar kale ku ciyaarto
Mario Kart Tour ayaa laga heli karaa Sebtember 25 dukaanka ciyaarta
25-ka Sebtember, shirkadda Japan ee Nintendo ayaa u oggolaan doonta, ugu dambeyn, inay soo dejiso mid ka mid ah cayaaraha ugu xiisaha badan ee ay leeyihiin taageerayaasha Mario Kart: Mario Kart Tour
EVE Echoes oo hadda laga heli karo beta: MMO-ta ugu wanaagsan ee meel bannaan lagu dejinayo ayaa dhowaan imanaysa
EVE Echoes wuxuu ka mid noqon doonaa dadka imanaya sanadka si ay u noqdaan sandbox MMO heer sare ah haddii arrimuhu u socdaan EVE Online.
Dawn of Zombies: Badbaadinta oo leh waxyaabo badan oo la mid ah maalinta ugu dambaysa adduunka
Dawn of Zombies: Badbaadadu waxay la socotaa muuqaal muuqaal weyn, laakiin qoto dheer hoosta ayaa ah nuqul ka mid ah kulamada badbaadada ugu fiican.
LifeAfter waa "barxadda mawduuca" ee "Netease" ee loogu talagalay kuwa doonaya tacaburrada degdegga ah ee leh zombies badan
LifeAfter waxay kuu kaxaynaysaa buuraha si aad ugu raaxaysato maalin qorax leh zombies badan iyo holocaust-ka aad cagahaaga ku haysato. Hiwaayad wanaagsan ayaa ku sugaysa.
Microsoft wuxuu bilaabay Gears POP si uu u siiyo qallooca qaabka ciyaarta Clash Royale
Gears POP wuxuu la yimaadaa rabitaan badan oo ah inuu dagaal badan siiyo Clash Royale iyada oo adeegsanaya qaacido u gaar ah sida Gears of War iyo mobile.
Minecraft Earth hadda waxaa lagu heli karaa beta loogu talagalay Android
Minecraft oo muddo dheer la sugayay oo ka faa'iideysata xaqiiqda la kordhiyay, Minecraft Earth, ayaa hadda lagu heli karaa beta loogu talagalay dadka isticmaala Android ee barnaamijka u saxiixay.
PAYDAY: Ciyaaryahankii 4v4 freemium ee aadka uxumaa oo dambi dagaal galay ayaa yimid
PAYDAY: Dagaal Dambiyeedku wuxuu horey ugu sii socdaa Android si aad ugu raaxeysato 4v4 multiplayer inuu noqdo tuug ama cop.
Marka ay tahay in aad barkinta xiriirinta si aad u ciyaarto ciyaar caadi ah sida OnPipe
OnPipe waa mid iska caadi ah, laakiin baahintiisa xad-dhaafka ah waxay ka qaadeysaa dhibco badan inay noqoto mid ka mid ah shilalka sannadka.
Kuwani waa qaar ka mid ah cinwaannada la xaqiijiyay ee la imaan doona Google Stadia
Tan iyo markii Google ay si rasmi ah u soo bandhigtay barnaamijkeeda ciyaarta fiidiyoowga ah, waxaa jiray shaki badan oo hareereeyay ...
Adventure-ka 'OneBit Adventure' waa RPG aad u weyn oo aad naftaada ku lumiso gododkeeda
'OneBit Adventure' wuxuu u yimid inuu soo qaado budada uu ka tagay Pixel Dungeon oo sidaas awgeed wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad sahamiso godadkeeda 5 fasallo oo kala duwan.
Banana Kong Blast waa ciyaar arcade firfircoon oo si cad ugu dayanaysa dameerka weyn ee Kong
Hadaad taageere u aheyd Dameerkii hore ee Dameerka, Banana Kong Blast wuxuu jeclaan doonaa inaad waqti fiican la qaadato madfacyadeeda sida foostooyinka.
Chessplode wuxuu chess u beddelaa ciyaar aad u la qabatimo oo xiiso leh
Haddii aad raadineyso ciyaar chess wanaagsan oo leh laba sharci oo cusub iyo hal dhibic oo ku saabsan ciyaartoy badan, waxay qaadataa waqti in lagu rakibo Chessplode mobilkaaga.
Gigantic X waa sawir qaade cusub oo isometric ah oo aad uga doonaya shirkaddaada
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato ficilka wanaagsan, waxaad horay u rakibaysaa Gigantic X, cinwaan cusub oo loogu talagalay Android oo muujinaya sawirada.
Riix dhagaxyada oo xakame xakamee si aad ugu xalliso xujooyinka halbeegga isometikada Sole Light
Sole Light waa xujo xasaasi ah oo ku tijaabin doonta tijaabinta adduunkeeda dystopian iyo aragtida isometric si aad u aragto jidka.
Terraria waxaa dib loo naqshadeeyay mobilka markay tahay Ogosto 27 iyadoo la cusbooneysiinayo 1.3
Nooca Terraria ee loo yaqaan '1.3' ee mobilka wuxuu la imaan doonaa naqshad isku xirnaanta kontaroolka si khibraddu ula mid tahay tan kumbuyuutarrada.
Quudhsiga 3k waa jilitaanka kheyraadka indie ee dadku ay yihiin hantidaada ugu qiimaha badan
Haddii aad raadineyso ciyaar gaar ah oo loogu talagalay moobilkaaga, kani waa Despotism 3k. Qabille oo dadku ay yihiin ilahaaga ugu weyn ee boqortooyadaada.
Dr. Mario World wuu ka fog yahay guusha Nintendo la filayo
Tirooyinka ugu horreeya ee ay daabacday Sensor Tower waxay muujinayaan in bisha ugu horreysa ee Dr. Mario World ay u fiicantahay sidii shirkadda Japan ee Nintendo ay filan lahayd.
Raadi wax badan oo ku saabsan sii deynta Trópico, ciyaarta caadiga ah, ee taleefannada Android si rasmi ah bisha Sebtember 5 sida la xaqiijiyay.
PlayGalaxy Link: Barxadda socodka ciyaarta ee Samsung ayaa timid Sebtember
Soo ogow faahfaahinta ugu horreysa ee ku saabsan PlayGalaxy Link, barnaamijka madadaalada ciyaarta ee Samsung oo suuqa soo gali doona bisha Sebtember.
Door Kickers ayaa si dhuumaaleysi ah uga soo galaya albaabka mobiilkaaga si aad u maamusho amarka weerarka
Door Kickers waa ciyaar tayo sare leh oo ka timaada kombiyuutarka waxaana lagu geliyaa mobiladaada si aad u xakamayso kumandooska ay tahay inuu badbaadiyo la haystayaasha.
PUBG Mobile Lite waxaa horey looga bilaabay dalal dhowr ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka PUBG Mobile Lite ee dalal kala duwan oo ku yaal Aasiya iyo Koonfurta Ameerika maadaama ay ugu dambayn rasmi noqotay.
Kari oo u adeeg macaamiishaada safarka aad ku qaadan doonto Safarka Macaan - Emily
Macaan - Emily Wadada Safarku waa ciyaar maarayn waqti ah oo aad ku karinayso, ku adeegayso isla markaana taas korkeeda waxaad ka qaadi doontaa macaamiisha adigu.
Kubadda si fiican ugu dhufo Stick Cricket Live multiplayer
In Stick Cricket Live waxaad kuheli doontaa batsman aad adigu ka bilaabi kartid ciyaartan gaarka ah. Bilaash si loo faafiyo Cricket-ka.
Ku soo booqo baarka ugu xun Philadelphia marwalba waa Sunny: Gang wuxuu ku socdaa Mobile
Had iyo jeer waa Sunny: Gang wuxuu u socdaa Mobile waa ciyaarta taxanaha TV-yada Mareykanka ee ay tahay inaad ku dhex wado baar oo aad ka barato sheekooyinkooda.
Isku dar gawaarida si aad ugu daadiso wadada oo aad u baabi'iso zombies-ka ku yaal MasherZ
MasherZ: Merge'n Smash Zombies waa ciyaar iska caadi ah oo ay tahay inaad isku darto baabuurta si aad ugu tuurto zombies-ka oo aad u dul marto.
Dagaalada u dhexeeya 2 ciyaartoy ee multiplayer khadka tooska ah ee Heroic Magic Duel
Sidii ay u ahayd dhinac dagaalladii Royale, Heroic Magic Duel ayaa kuu kaxayn doona ciyaaro ka dhan ah ciyaartoy kale oo leh sawirro wanaagsan iyo waxyaabo badan.
Taalada loo yaqaan 'Monument Valley 3' durba waxay ku jirtaa horumar
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan horumarka taallada loo yaqaan 'Monument Valley 3' oo durba bilaabatay sida ay xaqiijisay istudiyaha mas'uulka ka ah ciyaarta.
Dhexgal naftaada khibrada noolaanshaha kadib-apocalyptic ee Bad 2 Bad: baabi'inta
Haddii aad raadineyso ciyaar badbaado leh adduun furan iyo kala sooc la'aan howlgalada, Bad 2 xun: baabi'intu waa ka badan tahay kaamil.
Sida loogu ciyaaro shaydaanka asalka ah mobilkaaga Android
Waa run inaad awood u yeelan doonto inaad ku ciyaarto Diablo asalka ah mobilkaaga mahadnaqa Rivsoft adoo ku dhejinaya degelkeeda si ay ugu ciyaari karto asalka ama shareware.
Cube Blast Saga waa ciyaar waxoogaa asal ah marka la barbar dhigo xujooyinka kale ee midabkoodu badan yahay iyo baloogyadaas oo la isugu daro mobiladaada.
ChessFinity waa tusaale ka mid ah waxa la samayn karo inta udhaxeysa ciyaarta caadiga ah iyo waxa ugu yar ee aan caadi ahayn.
U hel hoy hoy shimbiro kala duwan oo badan Bird bnb
Waxaa jira Airbnb oo taleefannadeena waxaan ku leenahay Bird bnb shimbiraha doonaya inay bixiyaan fasax wanaagsan maalmahaan.
Istuudiyaha NVIDIA Lightspeed Studios wuxuu siidaayaa Pavilion: Taabashada Daabac ee Dukaanka ciyaarta
Haddii aan ka hadlayno ciyaar ay daabacday NVIDIA lafteeda, tani waxay ka dhigan tahay inaan ka hadlayno tayada oo ah ...
Pokémon Duel wuxuu macsalaameynayaa suuqan dayrta
Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka Pokémon Duel ee suuqa oo horeyba si rasmi ah ugu dhawaaqay xiritaankiisa ugu dambeeya deyrtan.
PUBG Mobile Lite waa xaqiiqo ku jirta Android waana soo socotaa dhowaan
Ka ogow wax badan oo ku saabsan PUBG Mobile Lite, nalka iyo heerka soo-gelidda taleefanka ee ciyaarta caanka ah ee dhowaan lagu daahfurayo Android.
Bethesda waxay ku daabacdaa laba halyeeyo fiidiyow ah ciyaarta 'Android': DOOM iyo DOOM II
Bethesda waxay u dabaaldegtaa sannad-guurada 25-aad ee DOOM iyada oo la bilaabayo DOOM iyo DOOM II illaa Android dhammaan maamuusyada iyo dhammaan waxyaabaha dheeraadka ah.
Dagaal Stick ayaa kaa dhigaya inaad ka horreyso ciyaaraha ugu badan ee ciyaartoy badan ee aad waligaa aragtay
Dagaal Stick: Ciyaarta Moobiilku waa ciyaar waali ah oo ciyaartoy badan ay ugu muhiimsan yihiin sidoo kale ...
Hadda waad iska qori kartaa Pokémon Masters si aad ugu diyaar garowdo imaanshahooda
Pokémon Masters wuxuu yimid kahor-diiwaangalin imaatinkiisa dhow waxaadna ku raaxeysan kartaa ciyaar kale Pokémon xagaagan.
Dhibaatooyinka Waqtiga Dheeraadka ah ee Fortnite hadda waa la heli karaa
Waxaa jira 7 maalmood oo keliya illaa xilli ciyaareedka sagaalaad ee Fortnite dhammaado. Dhamaan adeegsadayaasha aan wali ...
Dagaalyahannada cimriga dheer ee nolosha si ay ula dagaallamaan kaararka TEPPEN
TEPPEN waxay ku hor dhigeysaa dagaalyahannada ka soo jeeda ciyaaro quraafaadyo kala duwan ah si ay ula kulmaan ciyaartoy kale oo wata kaararkaaga oo ay tahay inaad ogaato sida loo maareeyo.
Alchemy Wars waa RTS-duug ah oo u yimid inuu buuxiyo god madhan oo ku yaal Android
Alchemy Wars waa RTS sida halyeeyga Starcraft u noqon karo Android. Ciyaar u timid inay buuxiso ...
Noqo kuwa ugu fiican doonyaha yar yar ee meeraha safka safka caadiga ah
Row Row waa mid aad u xiiso badan oo loogu talagalay Android sababtoo ah xaqiiqda ah inaad hoos u qaniinto asxaabtaada si aad u aragto cidda waqtiga ugu fiican ku leh wareegga.
Yokai: Ruuxu Hun wuxuu kuu kaxeeyaa aduunyada manga iyo dagaalka ku saleysan dagaalka
Haddii aad raadineysid RPG rogaal celis ah oo indhahaaga ku habboon, kani waa Yokai: Ugaarsiga Ruuxa. Ciyaar lagu raaxeysto sawiradeeda.
Mid ka mid ah ficilkii weynaa ee RPG sanadka ayaa yimid: Yeedhaha Koowaad
Shaki la'aan waxaan wajaheynaa mid ka mid ah ficillada RPG-yada sanadka: Yeedhaha Koowaad. Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato ciyaar tayo sare leh, waxaad lumineysaa waqtigaaga.
Dr. Mario World waa taleefanka gacanta ee lagu soo dejiyo
Raadi wax badan oo ku saabsan tirooyinka soo dejinta wanaagsan ee Dr. Mario World uu horeyba uga helay Android iyo IOS usbuuckiisii ​​ugu horreeyay ee hadda la heli karo.
Google Stadia waxay lahaan doontaa hal ciyaar oo bilaash ah bishiiba isticmaalayaasha Pro
Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiijinta in Google Stadia uu yeelan doono ciyaar bilaash ah bil kasta loogu talagalay dadka isticmaala koontada Stadia Pro.
Ku halaag dadka kale baabuurkaaga adigu sameysid ee adiga kuu gaar ah Minecraft Car Machaca
Minecraft waxaa loo isticmaalaa halkaan "matoorka" ee lagu dul dhisay Car Crusher. Cinwaan loogu talagalay Android la mar…
Geesiyaasha Difaaca Crazy waa difaac munaarad buuxda oo aan niyad jabin, laakiin gaabiya
Haddii aad raadineyso munaarad xagaagan, Halyeeyada Difaaca Crazy waxay leeyihiin in ka badan oo ku filan inay daanyeerkaaga ka saaraan ciyaarta noocaan ah.
Ubisoft wuxuu soo bandhigayaa nooca loo yaqaan 'UPlay + games' ee ka dhici doona Google Stadia
Ka ogow wax badan oo ku saabsan Ubisoft bilaabista cayaaraha iyada oo loo marayo barnaamijkeeda 'UPlay +' ee ku yaal Google Stadia sanadka soo socda si rasmi ah.
Mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee aan beryahan aragnay sida jilitaanka duulimaadka dagaalka: Dagaal Dogs Air Dogs
Dagaal Dogs Air Dob waa midka ugu wanaagsan ee aan beryahan aragnay isagoo ah jilid dagaal hawada ah si uu u aado Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Seefta Madoow 2 waxay keeneysaa wax kasta oo aan caan ka dhigay kii hore, laakiin markan seddex geesiyaal ah
Seef mugdi ah ayaa ah tii ugu horreysay waxayna qabsatay malaayiin ciyaartoy adduunka oo dhan ah. La soo noqo xoog weyn iyo 2 geesiyaal.
Saldhigga Tareenka 2 si loo abuuro boqortooyooyinka tareenka inta aad bixinayso
Saldhigga Tareenka 2 wuxuu kuu kaxeeyaa khibrad jilitaan tareen oo wanaagsan iyo inaad tahay maalqabeen warshadeed qaybtan.
PUBG Mobile beta wuxuu la socdaa Xagaaga cusub ee 8: hub cusub, qaabka HDR iyo wax badan
Xilliga 'PUBG Mobile' 8 beta waa halkan wuxuuna soo jeedinayaa hub cusub iyo qaabka HDR si ciyaarta Tencent looga dhigo mid aad u qurux badan.
Harry Potter: Wizards Unite wuxuu u dabaaldegayaa maalintii ugu horreysay ee Bulshada
Raadi wax badan oo ku saabsan maalinta koowaad ee bulshada ee Harry Potter: Wizards Unite ay si rasmi ah ugu dabbaaldegeyso usbuuca soo socda iyo waxa cusub.
Dhul Xun waa ficil toos ah oo RPG ah oo ballan qaadaya
Haddii aad raadineyso ficil RPG ah oo leh ciyaartoy badan, Evil Lands waa mid aad ku raaxeysan karto quruxda adduunka.
Sida Loo Burburiyo Khibradda Ciyaarta Ee Quusta Weyn Ee Loogu Talagalay Lacag La'aanta Epic
Haddii aad gasho adduunka abuurka ciyaarta fiidiyowga 'Ubisoft' wuxuu sameeyaa casharro aad u wanaagsan oo loo yaqaan 'The Mighty Quest for Epic Loot'.
Dr. Mario World, falanqaynta sii deynta ugu dambeysay ee Nintendo
Nintendo wuxuu u quudhinayaa cusub waxaa la yiraahdaa Dr. Mario World wuxuuna la yimaadaa rabitaan ah inuu boos ka helo goobta adag ee xujooyinka.
Dhimashada 'Project Zero Dhimashooyinka' waa barxad badan oo khadka tooska ah lagu ciyaaro oo leh qaabab kala duwan oo PvP ah iyo ciyaaro deg deg ah
Dhimashada Mashruuca Zero waa ciyaar aad u kacsan oo tayo sare leh iyo in, horeyba ugu jirtay beta, ballanqaadyo badan. Isu diyaari inaad la dagaallanto.
Google waxay ugu dabaaldegtaa Wimbledon ciyaar qarsoon natiijooyinka raadinta
Adoo raadinaya Google ereyga Wimbledon, Raadiyaha weyn wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku raaxeysano ciyaar tennis ah oo 8-bit ah
Pokémon GO wuxuu ku soo saaraa Android dakhli ka badan kan iOS
Raadi wax badan oo ku saabsan inta dakhliga ciyaarta Niantic ay abuurtay. Pokémon GO waa dakhli ku dhacay Android iyo iOS.
Sii midka leh bloda touchpee laad fiican si uu ugu bilaabo meel ka fog WonderPants: Rocky Rumble
Wonderpants: Rocky Rumble waa ciyaar waali ah oo aad u tuurayso dabeecada weyn meel aad u fog si uu kuwa kale ugu adeegsado inuu duulaanka ku sii wato
Iskuday inaad sameyso riyaha waalan ee ku socda dabaqyadiisa xiisaha leh ee Master Master
Walk Master waa ciyaar aad u wanaagsan oo si caadi ah loo qabtay oo loogu talagalay Android taas oo aad u baahan doonto inaad barato inaad ku socoto ari iyo dabaqyadiisa.
Wadarta Dilaaga Xisbiga waa madal ikhtiraac ah oo kaa xanaajin karta xayeysiinta
Hadday wax ka beddeleen qaabka ay u fahmaan xayeysiinta iyo lacag-ururinta Dilka Xisbiga oo dhan, waxay noqon laheyd ciyaar aad uga wanaagsan sida ay tahay.
Dhintay Deadlight beta oo hadda laga heli karo Android
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka barnaamijka 'Dead By Daylight beta' ee ku yaal Android kaas oo laga bilaabay dalal dhowr ah laakiin waan soo dejin karnaa hadda.
Ka ilaali masduulaaga oo ka difaac qasrigaaga dwarves ee Castle Woodwarf 2
Castle Woodwarf 2 waa difaac munaarad xiise leh oo leh uruurinta kheyraadka iyo ilaalinta masduulaaga ilmahaaga si ay u koraan.
Xulo hubkaaga si wanaagsan si aad u baabi'iso cadawga badan oo leh hal duub oo ku jira Micro RPG
Jaanis caadi ah oo la yimaada rabitaan badan oo madadaalo ah iyo la falgal nidaamkaas dagaalka ee ay tahay inaad ogaato sida hubkaaga si wanaagsan loogu doorto.
Ku burburi qaybaha Arkanoid gudaha birta Dungeon
Tuugta Dungeon waxay noo keentay cinwaan tayo leh oo aad khadka tooska ah uga ciyaari karto. Iska ilow wacyigalintaas maxaa yeelay ma jirto.
Tani waxay noqon doontaa qaabka cayaaraha badan ee Dr. Mario World
Ilaa 10, taariikhda Dr. Mario World si rasmi ah loo bilaabi doono, ragga Nintendo waxay daabaceen fiidiyow cusub oo muujinaya qaabka ciyaartoy badan.
Marka xayeysiintu ay kharribto khibrad ciyaareed wanaagsan ee Wadooyinka Xun GO
Wadooyinka Xun Xun waa ciyaar lagu burburiyey xayeysiinta taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan u qeybinno shaashadda si aan ula saaxiibno saaxiibkeen laakiin si fiican.
Chess Battle-kii ugu fiicnaa xilligan ee loogu talagalay kulamada ugu badan ee ciyaartoy badan
Saddex kulan oo aupa ah oo loo yaqaan "Battle Chess" nooca ku geyn doona guul farsamo oo weyn. U tag multiplayer buuxa.
Sannadkii 2019, 39.700 bilyan oo doollar ayaa lagu kharash gareeyay barnaamijyada moobiilka iyo ciyaaraha
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan tirooyinka ay isticmaaleyaashu ku bixiyeen barnaamijyada moobiilka iyo ciyaaraha ku saabsan Android iyo IOS rubucii ugu horreeyay ee sanadkan.
Miyaad ku dhiirrataa inaad u ciyaarto Flappy Bird sida Fortnite? #FranppyRoyale
Ciyaar caadi ah, oo ku habboon maalmahan xagaaga kulul ee Flappy Bird lagu daro a Fortnite. Bas iyo wax walba !!
Tencent waxay soo saartay Chess Rush si ay isugu daydo inay la wareegto xukunka «Chess Battle»
Chess Rush waa ciyaarta cusub ee ciyaartoy badan oo ka socota Ciyaaraha Tencent oo la socota dhammaan ujeeddooyinka ah inuu noqdo boqorka noocaan.
Fun Race 3D waa ciyaar caadi ah oo maalmahan xagaaga ah. Way kugu xidhi doontaa !!
Fun Race 3D waa ciyaar xagaaga lagu raaxeysto ah oo lagu madadaasho koorso caqabad waali ah oo ka dhan ah kuwa ka soo horjeeda dhabta.
Ciidanka Difaaca Godzilla oo gujinaya filim aan xumaan ahayn
Ciidanka Difaaca Godzilla waa gujis aan lahayn wax intaa ka badan oo baaxadda bahallada iyo in Godzilla uu taagan yahay. Difaac saldhiggaaga adduunka oo dhan.
Zed Dead wuxuu ka yimaadaa kombuyuutarka si uu kuugu keeno dhammaan xiisadda toogashada dhabta ah ee dhabta ah ee leh zombies badan
Dhimashada Zed ee ku taal Android waa wax lala yaabo in la dhex galo xasuuqii zombie-ga oo la ogaado sida saxda ah ee loo maareeyo dhammaan hubka aan haysano.
Kuwa Tuugta ah ee xifaaltanka ka dhexeeyaa waa ciyaartoy badan oo iska caadi ah oo leh laxan aad u tiro badan oo ay tahay inaad ku sharraxdo lacagtaada
Ciyaartooyda Tuugga ah waa xawli xawli ku socota, midab leh oo dhawaaqa xiisaha leh ee xiisaha leh. La dagaallama 9 ciyaartoy kale.
Ka dhig geedka inuu u kori doono xadka aan laga fileynin ee Nom Plant
Nom Plant waa casaan cusub oo loogu talagalay Android taas oo aad u baahan tahay inaad ka dhigto geedka sida ugu macquulsan si uusan u joojin quudinta.
Geesiga Koowaad wuxuu kuu qaadayaa dagaallo otomatik ah istiraatiijiyad badan oo istiraatiiji ah iyo indho qabasho weyn
Geesiga Koowaad waa socod wanaagsan oo taariikhda iyo magacyadaas u soo halgamay si ay u xukumaan ilbaxnimooyinka kale. Ciyaar dagaal toos ah
Eden kale waa RPG ah qaabka ugu caansan ee aan niyad jabin
RPG ah oo aan niyad jabin taasna waxay si toos ah kuugu ridi doontaa adduunkeeda. Eden kale waa lama filaan aan kaa tagi doonin danayn la'aan.
Cursivity waa xujo si fiican loo qaabeeyey oo hal abuur leh waqtiyada wanaagsan
Barnaamijku wuxuu ku shaqeeyaa 'Cursivity' ee loogu talagalay kuubku inuu raaco si aad u dhammeysan karto heerarka 20 ee gacanta loogu talagalay horumariye.
Sagaal milyan oo qof ayaa ciyaaraya Candy Crush saddex ilaa lix saacadood maalintii
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan tirooyinka lala wadaagay ciyaarta oo caddeynaysa in Candy Crush uu la qabsan karo dadka isticmaala qaarkood.
Scruffy eygu waa dab-damiye diyaaradiisa oo aad ku caawin karto Badbaadada Baalasha!
Ciyaar arcade ah oo caadi ah iyo freemium aad ku haysato Scruffy eyga, diyaaradiisa iyo dab badan oo aad damiso maalmahan kulul.
Game of Thrones wuxuu yeelan doonaa kulan cusub oo taleefannada ah 2019
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista cinwaankan cusub ee ku saleysan Game of Thrones, oo la filayo in la sii daayo sanadkan.
Ku soo qaado dhammaan rakaabka basaska tareenka tareenka caadiga ah iyo madadaalada
Waxay heshay aqbalid aad u wanaagsan, laakiin waxaa ka maqan nuxur iyo dhib tareenka Tagaasida si uu runtii noogu xirnaado oo uusan u noqonin mid caajis badan.
Sidee looga helaa tamar bilaash ah Harry Potter Wizards Unite
Waxaan ku tusineynaa qaababka ugu wanaagsan ee aad uga heli karto tamar sixir bilaash ah Harry Potter: Wizards Unite, oo ah kan ugu cusub Ciyaaraha Niantic.
Oliver iyo Benji waxay ku imaan doonaan aaladaha mobilada iyagoo wata Tsubasa + qaabka Pokémon GO
Ciyaarta soo socota ee dooneysa inay ka faa'iideysato faa'iidooyinka xaqiiqda la kordhiyay ay ka bixiso aaladaha mobilada waxay ka imaan doontaa gacanta Oliver iyo Benji oo wata Tsubasa +